ပန်ဒါ Eyes လေးတို့အတွက် BECCA Anti-Fatigue under Eye Primer လာပြီနော်!!! | CosmeticMyanmar
Home » Article » ပန်ဒါ Eyes လေးတို့အတွက် BECCA Anti-Fatigue under Eye Primer လာပြီနော်!!!
ပန်ဒါ Eyes လေးတို့အတွက် BECCA Anti-Fatigue under Eye Primer လာပြီနော်!!!
ပန်ဒါမျက်ဝန်းပိုင်ရှင်ပျိုမေတို့ရေ မျက်လုံးမှာပန်ဒါမျက်လုံးလို မည်းမည်းချိုင့်ခွက်ကြီးဖြစ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေလား? ဒါဆိုရင်တော့ အခုပြောပြပေးမယ့်ပစ္စည်းလေးက ဒီလိုပန်ဒါမျက်လုံးပိုင်ရှင်တို့အတွက် အသုံးတည့်စေနိုင်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ အဲဒီပစ္စည်းလေးကတော့ BECCA အမှတ်တံဆိပ်ကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Anti-Fatigue under Eye Primer လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ BECCA ရဲ့ Anti-Fatigue under Eye Primer လေးကို ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မျက်လုံးတစ်ဝိုက်မည်းညိုပြီး ချိုင့်ကွက်ဖြစ်ခြင်းမှာ ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့ အဓိကထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်လုံးလေးများရဲ့အောက်ဘက်မှာ အသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်ရာမှာလည်း ပိုမိုချောမွေ့ခြင်းကို ခံစားရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေတင်မကသေးပါဘူး။ အသက်အရွယ်အိုမင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ အရေးအကြောင်းများကိုလည်း ဖုံးလွှမ်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ သခွားသီး၊ Match Green Tea နဲ့ ကဖင်းတို့ရဲ့ပေါင်းစပ်ပါဝင်မှုက နူးညံ့တဲ့ထိတွေ့မှုကိုခံစားရရှိစေပြီး မျက်ဝန်းတစ်ဝိုက်ဧရိယာတွေကို အခက်အခဲမရှိဘဲ ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ပေးပါတယ်။ ဒီ Eye primer လေးကိုအသုံးပြုပြီးရင် မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်ရာမှာလည်း တွန့်လိပ်ခြင်း၊ အဖတ်လိုက်ဖြစ်ခြင်း စတာတွေလည်း မဖြစ်ပေါ်နိုင်စေပါဘူး။
အသားအရေကိုပျက်ဆီးစေနိုင်တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့ Parabens, Sulfates နဲ့ Phthalates တို့မပါဝင်တဲ့အတွက် စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုပေးနိုင်တဲ့ပုံစံကတော့ မျက်ဝန်းများအောက်ဘက်နဲ့ မျက်ဝန်းလမ်းကြောင်းတစ်ဝိုက် တို့ပုတ်ကာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ချောမွေ့မှုကိုရရှိစေဖို့အတွက် အသုံးမပြုခင်မှာ လက်ချောင်းလေးများနဲ့ နွေးထွေးအောင် ပြုလုပ်ပေးပါ။ မျက်ဝန်းများကို တစ်နေကုန် အားအင်ဖြည့်တင်းစေဖို့အတွက် မိတ်ကပ်လိမ်းပြီး အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။
Image Source – www.beccacosmetics.com
နေရောင်ခြည်ကနေ ရရှိနိုင်မယ့် ကောင်းကျိုးများ